မစိန်ရီ ပုစွန်မမြူးပါ -သော်ဇင်(လွိုင်ကော်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မစိန်ရီ ပုစွန်မမြူးပါ -သော်ဇင်(လွိုင်ကော်)
မစိန်ရီ ပုစွန်မမြူးပါ -သော်ဇင်(လွိုင်ကော်)
Posted by သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) on Oct 14, 2013 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 12 comments
ယပ်တောင်လေး တဖျပ်ဖျပ်ခတ်လိုက်ဟောဒီလမ်းမကြီးကို မျှော်ကြည့်လိုက်နှင့် မစိန်ရီ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေတာ သိသာလှသည်။ ဒါမျိုးဆိုရင် မစိန်ရီ စားဖို့သောက်ဖို့ပူနေရပြီဆုိုတာ သိသာ၏။ ခါတိုင်းလို တိမ်ပြာမို့မို့လွင်သီချင်းကိုလေသံတိုးတိုးလေးတောင် မညည်းနိုင်မှတော့ မစိန်ရီ ဘယ်လောက် ယောက်ယပ်ခတ်နေမလဲ ဆိုတာကိုတွေးသာကြည်တော့ပေါ့။ မနေ့ညက မိုးကြီးထားတော့ အနည်းဆုံး ဒီနေ့ ကိုကျော့မောင် ထမင်းစားကျောက်ကလေးပဲရလာပါဦး အူတော့ စိုကိုစိုလာမည်။ ဒါ့အပြင် ကိုကျော့မောင်ရဲ့ ကြံရည်ဖန်ရည်နဲ့ဆိုသောင်းဂဏာန်း ပိုပိုလောက်တော့ ပါလာနိုင်သည်။ ဒီလိုဆိုရင် ဒီနေ့ညအဖို့ မစိန်ရီ စိတ်ကူးထဲမှာလသာလို့ရပြီ။
အဲဒီလ သာမလား မသာမလားဆိုတာတော့မစိန်ရီက ခုမှ အိမ်ရှေ့ထွက်လမ်းမပေါ် မျှော်ရတာကိုကပဲ မောမောလှပေါ့။ သူတကာတွေ ဟေးခနဲဝေးခနဲ ကျောက်ထမ်းပြီး ရွာထဲဝင်လာရင် ကိုကျော့မောင်များပါလာလေးမလားလို့ မျှော်ကြည့်ရတာလည်းမောပါသည်။အနည်းဆုံးနောက်နားကျကျကနေပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေ့ကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိန်တူတွေစုပြီး ထမ်းလာသည့်လူတွေထဲတွင် ကိုကျော့မောင်ကိုရှာရတာလည်း မျက်စိတွေမူးရသည်။
ကျောက်မရလို့ သူများတကာရသည့်ကျောက်ကိုလိုက်ထမ်းပေးဦး အဲသည်ကျောက်များပွင့်လျှင် ဂျော်ကီထမ်းခတော့ ရနိုင်သေးသည်။ သည်လိုမဟုတ်ရင်တော့နေ့ကုန်အောင် တတောက်တောက်နှင့်ရှာ မတွေ့ရင် တပ်ခေါက်ပြန်ရုံလေး။ ညနေစောင်းပြီး ရွာထဲမှာမီးပွင့်ကလေးတွေ ဟိုတစ်ပွင့် ဒီတစ်ပွင့် လင်းလက်ဝင်းပလာတာတောင် ကိုတော် ကျော့မောင်ကရွာထဲကိုပြန်ဝင်မလာသေး။
မစိန်ရီ အိမ်ကလေးထဲပြန်ဝင်။ရေတစ်ခွက်ကိုခပ်သောက်ပြီး စိတ်ထဲမှာ အချဉ်ပေါက်ချင်လာမိသည်။ မနေ့ညကတည်းထွက်သွားလိုက်သည်မှာခုဆိုလျှင် ပြန်လာသင့်သည့်အချိန်ကိုလွန်နေပြီ။ ကိုကျော့မောင်က လူတစ်မျိုး။ ပြောရလျှင်ကိုယ့်ယောကျာ်းအကြောင်းလည်းကိုယ်သိပါရဲ့။ ကိုကျော့မောင် အကြောင်းပြောရလျှင် ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းရသည့်အဖြစ်မျိုး။
ကျောက်ကလေးရလို့ အူစိုသည့်နေ့ဆိုလျှင်အိမ်ကို တန်းပြန်ချင်မှ ပြန်လာသည်။ အနည်းဆုံးတော့ ဘိန်းခန်းလောက်ဝင်လျှင်ဝင်၊ မ၀င်လျှင်ဘီယာဆိုင်လေးတော့ထိုင်ချင် ထိုင်နေဦးမည်။ အိမ်က ဇနီးမယားက အိမ်ဦးနတ်ကြီးကြွလာမှာကိုလည်တမျှော်မျှော် လက်တဆန့်ဆန့်နှင့် မျှော်တော်ယောင် လုပ်နေရသည့်ကို မသိ။
အတော်လေးလည်း မူးပြီးဆိုမှ၊အတော်လေးလည်း စည်းစိမ်ရစ်မှ ယိုင်တိုင်တိုင်ခြေလှမ်းတွေကို အိမ်ဘက်သို့ ခြေဦးပြန်လှည့်တတ်သည်။
သည်နေ့ညလည်း သည်အတိုင်းထင်ပါရဲ့။အိမ်ပြန်နောက်ကျတာ အရေးမကြီး။ ကိုကျော့မောင် ထမင်းစားကျောက်ရလာဖို့ အရေးကြီးသည်။ ခုတော့ညကိုးနာရီပင်ထိုးပြီးသွားပြီ။ မစိန်ရီ ဗိုက်ထဲကလည်း သံစုံတီးဝိုင်းက ဘင်ခရာတပ်နှစ်တပ်စာလောက်တီးသလိုမျိုး တဂွီဂွီ တဂွမ်ဂွမ်နှင့် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးကို တီးနေပြီ။ အရေးထဲရွာထဲမှ ပျံ့နှံ့လာသည့် အကြော်အလှော်နှင့် အကင်နံ့တွေကလည်း နှိပ်စက်သထက် နှိပ်စက်လာလျှက်ရှိနေသည်။ပြီးတော့ ရွာမြောက်ခြမ်းတွင် ကွေးကွေးလေး ကွေးကွေးလေး ဟူ အော်နေသံက တစ်မျိုး၊ ဒူမည်းကြီးဒူမည်းကြီး ဟု အော်နေသံကတစ်မျိုးနှင့် မစိန်ရီ ထိုင်လိုက်ထလိုက်ဖြစ်နေရပြန်သည်။
“ကျော့မောင်ရယ် နင် မြန်မြန်ပြန်လာပါတော့“
“မစိန်ရီ ဒီအပတ် ဘာကြိုက်လဲ“
ဒါပဲ။ လူတွေက ခုတလော မစိန်ရီနားမှာစိုးမိုးကျော်လာလုပ်နေကြသည်။ မစိန်ရီကိုများ ဘာကြိုက်လဲဟုမေးလို့ကတော့ အကုန်ကြိုက်သည်ဟုပဲပြောမှာ သေချာသည်။ ထိုအထဲကမှာ ဘာကိုအောထားလဲဟု မေးမှသာ အဖြေကရသည်။ ခုလည်း စာရွက်ပေါ်မှာချရေးထားသည်ကိန်းတွေက များမှများ။ ကိုကျော့မောင်က မနက်က မှာသွားသည်။
“စိန်ရီ နင် အဲဒါတွေအကုန်ထိုးမလို့လားကြည့်လုပ်နော် နေ့ဖို့ညစာလေးလည်းချန်ဦး။ ငါ့ချည်းအသားကုန်မမျှော်နဲ့။ ကျောက်က နေ့တိုင်းရတာမဟုတ်ဘူး“တဲ့။
ကိုကျော့မောင်ပြောသမျှ မျက်လုံးကလေးကလယ်ကလယ်လုပ်ပြီးသာနေခဲ့သည်။ လက်ထဲရွှင်တုန်း ပေါတုန်းဆိုတော့ သည်နေ့ ကိုကျော့မောင်အိမ်ကထွက်သာနှင့်ရွာမြောက်ပိုင်းကိုသွားမည်။ ကြိုးတစ်ချက်ဆွဲလျှင် တစ်ချက်ကွေးရမည်။ တစ်နေ့ ပြတ်တုန်းလပ်တုန်းဆိုတော့ ရွာမြောက်ပိုင်းကို ခြေဦးမလှည့်နိုင်ခဲ့။ အသံတွေသာကြားပြီး အသည်းတွေသာယားနေရသည်။ ထိုည ကိုကျော့မောင်အိမ်ပြန်နောက်ကျသည်။ သို့သော် မစိန်ရီ အပြစ်မပြောတော့။မပြောဆို ကိုကျော့မောင်က မစိန်ရီပါးစပ်ကို ငွေထုတ်နှင့်ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်ကိုး။
ဟော မနက်လည်း လင်းရော မနေ့ညကမစိန်ရီက သည်ကနေ့မစိန်ရီနှင့်မဆိုင်သလိုလိုမျိုး။ မမုံဈေးကို တစ်ပတ်မက ဖြတ်လျှောက်ပစ်လိုက်သည်။မနေ့က ၀က်ရိုးတစ်ထောင်ဖိုးလောက် ပေးပါဆိုတာကို အရေးမလုပ်လို့ သည်ကနေ့တော့
“ပေါင်သားတစ်ပိဿာပေးစမ်းပါ“ဟုမစိန်ရီတို့ ခပ်ပြတ်ပြတ်ဆိုဖြစ်ပြီ။ သည်လိုဆိုတော့လည်း
“ဟုတ်ဟုတ် ခဏလေးနော် ချိန်နေပြီအစ်မ“ဆိုပြီးချိုနွဲ့နေလိုက်တာများ မယားငယ်လေသံအတိုင်းပင်။ မနေ့ကဖြစ်အင်က စလင်းဘတ်အိတ်ကလေး ဘေးစောင်းလွယ်လိုက်ရုံနှင့်အနေအထားက တစ်မျိုးပြောင်းသွားသည်။ ပြီးတော့ မစိန်ရီ ရေစိမ်စားမည်။ ဘုရားပန်းဝယ်မည်။
ဘုရားပန်းအိုးမလဲဖြစ်သည်ပင်တစ်ပတ်ခန့်ကြာသွားသည်။ ကိုကျော့မောင် ပြန်လာတိုင်း ထမင်းဝယ်စားလိုက်ရသည်နှင့် ပန်းဝယ်ဖို့အနားမကပ်နိုင်။မစိန်ရီက ကိုယ့်စိတ်ထဲ ရတနာသုံးပါးရှိနေရင် ပန်းမလဲလည်း ဘာအရေးလဲဟု ပိုက်ဆံပြတ်လျှင်တွေးသည်။ ပိုက်ဆံပေါသည့်အခါမျိုးတွင်တော့ ဘုရားစင်က ပန်းတွေနှင့်ဝေပြီး သပ္ပါယ်ချင်တိုင်းသပ္ပါယ်နေတော့သည်။
သည်ကနေ့ ဘုရားပန်းလဲပြီးတာနှင့်ဘုရားရှိခိုးပြီးလျှင် တစ်ခါတည်းဆုတောင်းပြီး ရွာမြောက်ဘက်ကိုလှည့်မည်။ အမွေးတိုင်လလေးထွန်းညှိရင်းနုတ်ကတတွတ်တွတ်ရွတ်ဆိုလိုက်သည့်ခဏ မစိန်ရီစိတ်ထဲရွှင်လန်းသွားရသည်။
“အရှင်ဘုရား ဒီကနေ့ တပည့်တော်မကွေးကွေးလေးနှင့်ကနိုင်သလို မည်းမည်းကြီးစီးပြီး အိမ်ပြန်မျက်နှာပန်းလှပါရစေ ဘုရား“
ဒါပဲ မစိန်ရီ ဆုတောင်း။ ဆလင်းဘတ်အိတ်ကလေးလွယ်။ ယပ်တောင်တစ်ချောင်း ဖျတ်ခနဲဆွဲပြီး ဘေးတစ်ခန်းကို မစိန်ရီ အသံပြုလိုက်သည်။
ပြောရင်းဆိုရင်း မိုးကလေးတောင်ဖွဲလာပါပေါ့လား။ အနေအထားက ရွှေဖား၊ ရာသီဥတုက မစိန်ရီဘက်ပါလာမှတော့ ခိုင်ရွှေဆိုင်က ထမင်းချိုင့်ပါဆွဲပြီးရွာမြောက်ဘက်ကို ခြေဦးလှည့်မိတော့ မိုးက ဖွဲရာမှ သည်းလာပါပေါ့လား။
သည်နေ့တော့ လက်ကီးဒေးပဲ။ မစိန်ရီ မျက်လုံးတွေတလက်လက်တောက်ပနေပုံကအခြေအနေပေးနေသည် မှန်းသိသာစေသည်။ ကြိုးတစ်ချက် ဆွဲလိုက်တိုင်း အကောင်တွေပူးသည့်အခါပူးတစ်ချက်တစ်ချက် သုံးကောင်တောင် ထပ်သွား လိုက်သေးသည်။ သည်နေ့ မစိန်ရီ၏ ပုစွန်စိတ်ကလေးပင်လယ်ကူးနေသည်မှာ မြူးဟန်ရှိသည်။ ပြီးတော့ စီးတော်ယာဉ် ဒူမည်းကြီးကလည်း ယဉ်လိုက်သမငြိမ့်ငြိမ့်ကိုညောင်းနေသေး၏။
“ကြက် ဆင် ကျား ×××××ကြက် ဆင် ကျား ××××××ကြက် ဆင် ကျား“
ဒိုင်ကအော်နေပြီ။ မစိန်ရီလက်တွေ ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်လိမ့်ချင်း ကြိုးကိုဆွဲယူနေသည်။ ပါးစပ်ကလည်း
“ကွေးကွေးလေး နော် ကွေးကွေးလေး ကွေးကွေးလေး“
မစိန်ရီထိုကဲ့သို့အော်တော့ နောက်ကထိုးသားတွေကလည်း လိုက်အော်သည်။အသံသည် မြိုင်သည်။ ဆိုင်သည်။ ညီညာ ထကြွသည်။ မစိန်ရီစိတ်တွေလေထဲပဲလွှင့်ချင်သလိုလို မြောချင်သလိုလိုနှင့်။ကြိုးကို နောက်ဆုံးဆတ်ခနဲရုတ်ချလိုက်သည်။
“ကလုံ ကလုံ ကလုံ“
ပုစွန်နှစ်ကောင်က မစိန်ရီမျက်လုံးရှေ့မှာ ကွေးကွေးလေး။
သည်နေ့အိမ်ပြန်မျက်နှာပန်းတော့ မစိန်ရီကိုလှစေပစေပြီ။ ကိုကျော့မောင်တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်တော့ကျောက်ထွက်မရှာလည်း အရေးမကြီး။ ခုတော့ စိတ်ကိုဖြတ်ပြီး ထိုင်ရမှထဖြစ်သည်။ ဒါတောင် ဒိုင်က
“ပြန်တော့မလို့လား လောပန်မရဲ့ လုပ်ပါဦး အချိန်ရှိပါသေးတယ်“
“ဟင်းဟင်းဟင်း ဒီနေ့ညတော့ တော်ပါပြီရှင် တစ်ခါတစ်လေလေးလည်း တာကောတို့ ပေးလိုက်ဦးမှပေါ့လို့“
မစိန်ရီက ဘေးအိမ်က ပလောင်မလက်ကိုဆွဲပြီးထွက်လိုက်တော့ မိုးသည်းနေပြီ။မိုးသည် တစ်နေ့လုံးရွာသည်။ ခုတစ်ညလုံးပင်ရွာမည်လားမသိ။ မစိန်ရီ ရွှေတောင်ကြီးစားသောက်ဆိုင်ကခေါက်ဆွဲကြော်နှစ်ပွဲနှင့် ကိုကျော့မောင်အတွက် ၀ီစကီတစ်ထောင့်ဆွဲလာခဲ့သည်။ မစိန်ရီအကြိုက်ကုမ်းဂွေဝိုင်ကလည်း ပလောင်မနှင့် သောက်ရအောင် မပါမဖြစ်ဆွဲခဲ့သည်။ ပြီးတော့ တစ်လမ်းလုံးပလောင်မကို ပြောလာခဲ့သည်က
“ပလောင် ဒီနေ့ပုစွန်မြူးတယ်နော် “
ရွာထဲတွင် ဓါတ်မီးတွေတ၀င်းဝင်းနှင့် ဆိုတော့ ကျောက်များရလာလေသလား။မစိန်ရီ ပလောင်မနှင့် ၀ိုင်သောက်ရင်း ရွာလည်လမ်းကိုငေးသည်။
“ဟေး ရေမဆေးသမားတွေ စုကြပါဟ မိုးကြီးတော့ မြောတွေပါလာတာ ရွာထဲကရေမဆေး သုံးယောက်မြောနဲ့ပါသွားတယ်။“
မစိန်ရီကိုယ်ကလေး မတ်သွားသည်။ မှန်း မနက်တုန်းက ကိုကျော့မောင်ဘယ်ဘက်ကိုကျောက်ရှာမယ် ပြောခဲ့သလဲ။ ဆတ်ခနဲထိုင်ရာမှထကာ ပြေးလွှားနေသော ရေမဆေးတွေထဲကတစ်ယောက်ကို ဖမ်းမေးလိုက်သည်။
“မက်လင်ချောင် လို့ပြောတယ် ခုသွားကြမှာ မိုးကကြီးတော့တောင်ကျရေတွေကြောင့်မြေစာတွေပါလာတာလေ။ ခုပုံအတိုင်းဆို အလောင်းတောင်ရဖို့မသေချာတော့ဘူးဗျ“
“စိန်ရီ ဒီနေ့ ငါ မက်လင်ချောင်ဘက်သွားမယ်။“
ကိုကျော့မောင်ပြောသွားခဲ့သည်မှာ မက်လင်ချောင် သေချာသည်။ ဘုရားဘုရား။ ချက်ချင်းအိမ်ထဲပြန်ဝင်ပြီး စစ်ပွိုင့်ဖိနပ်ကို ၀င်စီးတော့ ပလောင်မက ပြေးလာကာ
“ဘာဖြစ်လို့လဲ မစိန် ဘာဖြစ်လို့လဲ“
“ပလောင် မက်လင်ချောင်မှာ မြောပေါက်တယ်တဲ့။ ကိုကျော့မောင်အဲဒီဘက်ကျောက်သွားရှာတာဟ ။ ငါစိတ်ပူလို့လိုက်သွားမလို့“
“ဟယ် နင်လိုက်သွားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ နေပါဦး ကိုကျော့မောင်နဲ့သွားတာဖိုးလေးပါတယ်မလား ဖိုးလေးအိမ်ကိုအရင်သွားကြည့်ရအောင်“
ခြေလှမ်းသည် သွက်သည်။ မိုးသည် ခပ်သွက်သွက်ကလေးရွာသည်။ ဗွပ်သည်ထူနေပြီ။ လမ်းမပေါ်ရှိရေအိုင်ကလေးတွေကို ပက်ခနဲ နင်းပြီး ပြေးလွှားနေသည့် မစိန်ရီ၏ ခြေလှမ်းများလျှင်မြန်နေသည်။ ဖိုးလေးအိမ်တွင် လူတွေစုနေသည်ကို မြင်တော့ မစိန်ရီက ခြေအစုံကိုရပ်ပစ်လိုက်သည်။ပြီးတော့
“ပလောင် နင်သွားမေးကြည့်ဟာ ငါ ငါ မမေးရဲဘူး“
ထိုစဉ်မိုးသည် ဝေါခနဲ သည်းချလာပြန်သည်။ မိုးသည်းနေသည့်ကြားမှမစိန်ရီအသံတစ်သံကို ကြားဖြစ်အောင် ကြားလိုက်ရသည်။
မစိန်ရီ အကြောတွေ ဖျင်းခနဲ……။ လျှပ်စီးသည် ၀င်းခနဲ..။
“ကျား ပုစွန် လိပ်×××××ကျား ပုစွန် လိပ်×××××× ကျား ပုစွန် လိပ်“
ပထမဆုံး အန်စာတုံး ကျလာသည်။
ဒုတိယ အန်စာတုံး လေးကျလာပန်သည်။
တတိယ အန်စာတုံးလေး ကျလုကျခင်နှင့်…….။
အကယ်၍ ဘုရားပန်းလဲသည့်နေက မစိန်ရီ ဆုတောင်းက
“အရှင်ဘုရား ဒီကနေ့ တပည့်တော်မ၏ အိမ်ဦးနတ်ဖြစ်သူ ကိုကျော့မောင်တစ်ယောက်ကျောက်ရှာရာတွင် ဘေးမသီရန်ခမဘဲနှင့် ကျောက်များလည်းတွေ့ပါစေ၊ တွေ့တိုင်းလည်း ပွင့်ပါစေ၊“ဟုများ ဆုတောင်း ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်
“ဒီနေ့ ပုစွန်မြူးတယ်နော်“ ဟု ပြောဖြစ်ခဲ့လိမ့်မည် မထင်ဘူး။
မစိန်ရီ မျက်စိထဲမှာ နွံတွေထဲက ကိုကျော့မောင်အလောင်း ကွေးကွေးလေးကိုမြင်ယောင်ရင်း တ၀ဲလည်လည်နှင့်…။
နယ်မှာဆိုရင်တော့ အမိန့်ရ အာဝါဒေးပွဲ တွေမှာ
အဲဒီ ဂလုံး ဂလုံး ဂလုံး ခေါ် ဒူးမဲကြီးကစားကွက်တွေကတော်တော်ပေါတာပဲ
မှတ်မှတ်ရရ တခါသွားကြည့်နေရင်း စိတ်ပါလာလို့ ၀င်စမ်းမိတာ
ဟီး ကျွန်တော်ရောပဲ ဘယ်လောက်ထိုးထိုးတစ်ခါမှမရဖူးဘူး စိတ်နာတာနဲ့ပဲ နောက်ထပ်မထိုးဖြစ်တော့ဘူး
အသံမကြားချင်လို့ ပွဲခင်းဆို အဲဒီအတန်းတွေဘက်မလှည့်တော့ဘူးဗျ
ဖတ်ရတာ သနားတာလိုလို အပြစ်တင်ချင်တာလိုလိုဖြစ်သွားတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောင်းကစားကိုမှ အရှုံးကြီး ရှုံးတဲ့ထိ မစွဲလန်းဖူးလို့။
တနည်းအားဖြင့် အနိုင်ကြီးမနိုင်ဖူးဘူးလို့ ပြောလို့လည်း ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ရှုံးကိုရှူံးတာဗျ ဟီး
လူ့ ပါတ်ကျင် ဓလေ့စရိုက်တွေကို သေချာလေ့လာပြီး ရေးသားနိုင်တာဘဲ..
ကို သော်ရဲ့ ထူးခြားမှုက အသေးစိတ်ချယ်မှုန်းနိုင်တာဘဲ..။ ဇာတ်လမ်းက ရသ ဆန်ပြီး ကောင်းတယ်..
ကျနော် ထင်တာတော့ တချို့ အပိုဒ်တွေ ရှေ့ နောက် ထားသိုတာ နည်းနည်းလိုနေတယ်.. ကျနော် ဖတ်ရင်း ရှေ့ နောက် ရောနေတယ်.
ဟို ရတီမဂ္ဂဇင်း မှာပါတဲ့ မှောင်ထဲမှာ ဖတ်ပြီးပြီ.. မမန့် ဖြစ်သေးတာထင်တယ်..
အဲဒါလေးကို ပိုကြိုက်တယ်.. ချဲ့ကားတွေးသလောက် မျက်စေ့ထဲမှာ မြင်လာတဲ့ အကြောင်းတွေ အများကြီးဘဲ…။
အမြဲ ဖတ်ပါ့မယ်..ဒါပေမယ့် ကျနော် ကွန်မန့် ပေးတာ နောက်ကျတတ်တယ်..း)
ဟုတ်ကဲ့ ကိုကျော်ရေ နောက်ကျခြင်းမကျခြင်းကို ထူးထွေပြီးမခံစားမိပါဘူးဗျာ ကျွန်တော်က မန့်မြင်နေရရင်ကို စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတာဗျ
အဲဒီ လို ဖတ်ရတဲ့အရသာကို… နှစ်သက်ကြည်နူးမိတာ…..
်ဖတ်ပြီးစိတ်မကောင်းတောင်ဖြစ်သွားတယ်။ တကယ့်ကိုပဲ လက်တွေ့ဘ၀တွေကိုခံစားလိုက်ရတယ်။
ကံကောင်း ကံဆိုးကြီးပါလား။ :eee:
အသက်နဲ့ရင်းပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေနေကြရပြီး ရလာတာကို တန်ဖိုးမထားပဲ သောက်စားပျော်ပါးဖြုန်းတီးပစ်ပြီး ဘ၀ကို ပေါ့ပေါ့လေး တွေးနေသလိုပဲ။
“စိန်ကြည်နော် စိန်ကြည် လင်ယူပက်စက်သည် ဂျပန်ကြီးက တိုကျိုပြန် ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ကျန် “
၀ါသနာပါရင် ရင်ထုပီး ငိုလို့ရဘီ… လောင်းကစားနဲ့ အကျိုးမပေးပုံများနှယ်… ရုံးမှာ ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲဖောက်တာတောင်…. ဘာမှ သုံးစားမရတဲ့ခြင်းအခွံ ပေါက်ပါဒယ်ဆို